Chi ji ehihie jie ka mmadụ itoolu, ụgbọala 54 gbara ọkụ na Legos - BBC News Ìgbò
Media captionLee ọkụ ọgbụgba si n'ụgbọala mmanụ mere n'Otedola Bridge na nsonso Berger, Legos taa
Ozi si n'aka otu gbatagbata nke Legọs steeti nke a kpọrọ Lasema n'aha ịchafụ ekwuola na mmadụ itoolu nakwa ụgbọala 54 bụ ihe gbara ọkụ n'Otedola Roundabout dị n'okporoụzọ si Legọs gawa Ibadan dịka ụgbọala bụ mmanụ ụgbọala gbara ọkụ.
Image Copyright @rrslagos767 @rrslagos767
Na mkparịtaụka ya na BBC nwere n'ekwenti, onyeisi ndị na-achịkọta nchekwa njem ụgbọala nke a kpọrọ FRSC n'aha ịchafụ bụ Hyginus Omeje kọwara ihe butere ihe mberede ahụ bụ na ụgbọala ahụ bụ mmanụ kwụpụrụ n'aka onye kwọ ya ga kụrụ ogbe dị n'akwa Otedola nke mere ka ihe o bu daa n'otu ume ahụ kwafuo, ma nwuru ọkụ n'otu ntabi anya.
" Ihe mere oge ndị mmadụ iji ala ahịa maọbụ ọrụ nke mere nke bụ na e nwere ụgbọala kwụkọrọ ọnụ n'ahịrị mere na ụgbọala 54 gbara ọkụ."
Ka ọ dị ugbua, ndị ọrụ gọọmentị dị iche iche dịka Lasema,Lasambus nakwa FRSC anọrọla ebe ahụ na-ebupụ ozu, ụgbọala ọgbụgbara ma na-enyere ndị merụrụ ahụ aka.
Ngalaba na-ahụ maka nhazi ahịrị ụgbọala na Legọs steeti adụọla ndị njem ka ha hapu isi okporouzo gara Berger, Legos n'ihi nsogbu a dịka akụkọ na-ru anyị aka na-ekwụ na ihe mberede a akpọchiela ụzọ rue Third Mainland bridge.
Image Copyright @TunjiDisu1 @TunjiDisu1
Image Copyright @TrafficChiefNG @TrafficChiefNG
Lee ihe ndị nọ ebe ọ mere na-ekwu maka ya:
Image Copyright @olucheye @olucheye
Image Copyright @SisiLizzzy @SisiLizzzy
Image Copyright @Tobiloba_O @Tobiloba_O
Ihe mberede Okporo ụzọ eriela ndụ mmadụ atọ na Lagos
Mberede okporoụzọ egbuola ụmụakwụkwọ 21 na ndị nkuzi
13 Febrụwarị 2018
29 Juun 2018
Iwu ise ndị ọrụ ntaakụkọ kwesiri iso
Ihe onyonyo gosiri ebe egburu ndị agha bụ asị ndị Ipob - Sagir Musa